असामान्य सिफारिसहरू असम्भव छ र हरित आँखा र गोलो कपालको लागि एक सार्वभौमिक मेकअप चयन गर्नुहोस्, किनभने प्रत्येक व्यक्तिको रङ्ग ढाँचा अनूठा छ। तपाईं केहि प्रकार को प्रकार जस्तै "शरद ऋतु", "वसन्त", "जाडो" वा "गर्मी" को चयन गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रायः मानिसहरू मिश्रित रङ्ग प्रकारका छन्। भित्री बालोंका कपालहरू धेरै फरक हुन सक्छन्: सुनको गोलो, अश्रा, रातो-कपाल, र आँखाको रङको उल्लेख गर्न होइन।
मेकअप रोज्दा, व्यक्तिगत रंगको अलावा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि उपस्थिति र संतृप्तिमा पनि भिन्न हुन सक्छ भनेर महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाहिँ केटीले आफैंको लागि सही छायाँ छनौट गर्दछ, तर एकै समयमा एक कालो पिक्चरर लिन्छ , एक नरम गैर-विपरीत उपस्थिति रहेको छ (उदाहरणका लागि, हल्का खैरो हरा हरियो आँखा, निविदाको हल्का छाला, एक्लो बालोंका कपालहरू)। यस अवस्थामा, आँखाहरू अनौपचारिक हुनेछ।
यद्यपि, ब्लु-आइड ब्रुलेट्सको तुलनामा हरियो-आँखाका गोलाकारहरू धेरै फरक हुन सक्छ भन्ने तथ्यको बावजूद, तिनीहरूसँग सामान्य छ। तलका रंगहरू जुन खैरो आँखाका साथ खैरो बालों वाली केटीहरूको लागि आधारभूत मानिन्छ।
गोल्डन, बेजस्ता, तामाङ।
टकसाल र फरोज़ा।
यो यस प्यालेटमा छ कि तपाईंले ती महिलाहरु को लागि आफ्नो व्यक्तिगत रंग को लागी हेर्न को लागी को लागी रंग को एक नरम संयोजन छ: हरा आँखाहरु, उचित बाल। माथिको टोनमा मेकअप फायदाले उनीहरूको आदरलाई जोड दिनेछन्। हरियो आँखाका लागि निम्न आकारहरू निकै गाह्रो हुन्छन्। तिनीहरू टाढा जानैपर्छ:
नीलो र नीलो। एक नियमको रूपमा, हराई आँखाका केटीहरू जान्दैनन्। बाहिरका लागि दुर्लभ नीलो हरित आँखाको खुसी मालिकहरू को बाहेक।
संतृप्त लाल, ईंट, नारंगी। तिनीहरू आँखाको हरियो संग मिश्रण गर्न सक्छन्, तर गोरा कपाल संग छैन।
सिलोरी। हरियो आँखाको साथ यो रंगको छाया छाडिएको र इन्फ्लेक्सिभ हुनेछ। अपवाद धेरै हल्का गोलाकारहरूको मोती-ग्रे-हरी आँखा हो। यस अवस्थामा, सिल्ली पिक्सेल धेरै सुन्दरताले रंगमा जोड दिनेछ। तथापि, यो स्तम्भ विकास को रेखा को सावधानीपूर्वक छान्न को लागी आवश्यक छ ताकि आँखा हराएनन्।
साथै, हरित आँखा र गोलो कपालको लागि श्रृंगार प्रदर्शन गर्दै, तपाइँसँग सावधान रहनु पर्छ:
कालो eyeliner। नियमको रूपमा, हरी-आँखाका लुगाहरू एक नरम र तातो रंगको प्रकार छ, तिनीहरूलाई कालो अनैतिक र धेरै विपरीत हुनेछ। तिनीहरू एक चकलेट, सुनको वा खैरो रंगी eyeliner छनौट गर्न राम्रो छ। तथापि, ब्ल्याकमा तपाइँ हरी आँखाको कुनै छायालाई जोड दिन सक्नुहुन्छ, यदि यो सफा र उज्ज्वल छ भने, प्रोटीन बत्तीको स्यालो हो।
गुलाबी रंग यो अचम्म लाग्न सक्छ। तर यो एक विशेष दृष्टिकोण चाहिन्छ। कुनै पनि सल्लाह दिन गाह्रो छ, तपाईं मोडेलहरू हेर्न आवश्यक छ। यदि शङ्कामा, यो गुणाको रूपमा गुलाबी प्रयोग गर्न राम्रो छ।
हरियो छाया। टोनमा टोनको छाया पूर्णतया आँखाको रङ्गलाई जोड दिन सक्छ, तर यसलाई धब्बा गर्न सक्छ। एरिजको छाया दोहोर्याउनुको अर्थ कसरी सही ढंगले प्रयोग गर्ने? तपाईंले यसलाई पिक्सेलमा राख्नु हुँदैन वा "धुवाँ" गर्नु हुँदैन - एक अनियमित ग्रीन स्पेस प्राप्त गर्ने खतरा छ।
यदि तपाईं ईरिसको टोनमा छायाहरू उठाउनुभयो भने, उनीहरूलाई एक्सेन्टको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ वा, यदि विचारले मोनो-मेक-अपलाई सुझाव दिन्छ, तपाइँलाई आँखामा कम्तिमा पेंसिलसँग कम्तिमा जोड दिनुहोस् र तपाईका आँखामा राम्रो तरिकाले पेंट गर्न आवश्यक छ। अझै पनि, राम्रो छ कि विपरित रंगहरू हराउन रोज्नुहोस्। उदाहरणको लागि, तपाईसँग हर्बल आँखाहरू तातो पार्नु हुन्छ। ताज फेरोक्ज टोनले उनीहरूको गर्मीलाई बलियो बनाउनेछ। आँखाहरू पनि उज्ज्वल लाग्दछन्। तर यो मनमा हुनु पर्छ कि चुनेको चिसो छाया तीरहरू वा छालाको रंग संग असंगत हुनु हुँदैन।
चिनो आँखाको लागि श्रृङ्खला र केही रङ प्रकारका कपाल कपालको वर्णन गरौं। यी प्रजातिहरूको नामहरू मनमार्ग छन्।
आँखाको गहिरो हरियो संग गेहूं, हनी गोरा कपाल, हर्बेसस-हरियो वा खैरो, सजिलो स्वर्ण माध्यमको छाला सजिलै उडाउँछ। उपस्थिति को मुख्य रंग - सुनहरा, प्रभाव - सूर्य, उष्ण, चमक। यी केटीहरु आफ्नै मा धेरै देखिने देखिन्छन् र श्रृंगार फेंक चाहिन्छ। तिनीहरू मेनु एक ला नटुरा गोल्डेन-बेजस्ता टोनहरूमा जान्छन्। ओठमा - हल्का चमक वा आचरण लिपस्टिक। साँझमा तपाईं बेजस्ता, सुन र भूरा, जटिल गर्मी-बैंगनीको अधिक संतृप्त छायाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उज्यालो मेकअपका लागि - नेम, हर्बल हरियो।
धेरै हल्का आश-गोलो कपालहरू, खैरो हरियो आँखा सफा, सुन्दर छाला। उपस्थितिको मुख्य रङ ग्रे, प्रभाव - निष्ठा, वायुमण्डलीपन, उत्थान, कूलता हो। यस्ता केटीहरू मेला अपमान र कालो पनि खर्च गर्न सक्दछ। अँध्यारो खरानीको धुरीको आँखा आँखाको स्पष्टतालाई जोड दिनेछ र राम्रो देख्नेछ। साथै, जटिल परोजोज़, एक्वामारिन, धीरे भाइरस, एथस्टीय - सबै रंगहरू ठुलो, सज्जन हुन्। लिपस्टिक - गुलाबीको मात्र हल्का र चिसो रंगहरू।
मध्यम र गाढा भुरा कपाल र हल्का छाला, जुन थोपा पहेँलो टिंग छ। जब सूर्यबर्न लगभग जैतून हुन्छ। आँखाहरु एक जटिल हरियो रंग छ, अक्सर मिश्रित, घने पहेंलो वा खैरो को चौधरी संग। उपस्थितिको मुख्य टोन पहेँलो हरित छ। कस्तो रंग मेकअप यो रंगको हरित आँखा फिट हुन्छ? राम्रो तालमेल हुनेछ, मामी हरी टोनहरू, मोटो बैंगनी, भूरी-हरियो। तपाईं नीलो रङका केही गैर-छोरो रंगहरू जस्तै प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। लिप मेकअपमा गहिरो ब्राउन-सुन्तला-सुनको सुनको मूल्यमा गरिन्छ।
कपाल - तांबा-हल्का खैरो, धेरै हल्का नरम छाला एक अलग रातो टन्ट संग, आँखा उज्ज्वल र विपरित। उपस्थितिको मुख्य रङ्ग एक चिसो रातो हो। छायाको टोन जसले सबै भन्दा राम्रो यो हालतमा हरियो आँखालाई जोड दिन्छ, बैंगनी बैंगनी, एथ्टिस्ट, बैंगनी, बैंगनी। कुनै अन्य केटीले आँसु पुछिदिने जोखिमको बिना बैंगनी छाया लिन सक्दैन। तर यो रङ्ग-प्रकारका लागि तिनीहरू आदर्श छन् - आँखाहरू पनि हराउनेछन्। होंठ - चिसो गाढा वा हल्का शराब वा रूबी टोनमा।
हरियाली आँखाका साथ हरित आँखाका लागि मेकअप सुझावहरू
तपाईले हरियो आँखाको छायामा जुनसुकै तपाईले टोनमा वा यसको विपरीतमा आफ्नो स्वरलाई जोड दिन सक्नुहुन्छ। तल फोटोहरू तुलना गर्नुहोस्। केटी ठण्डा रंगमा छ, दुवै अवस्थामा उनीहरूले मोती समाप्त संग छाडहरू प्रयोग गर्छन्, जुन सधैँ रङको सुन्दर तातो दिन्छ। मेकअप शांत भूरी टोनहरूमा उनको आँखा लगभग खैरो बनाउँछ, तर सामान्य छविमा धेरै ध्यान दिइन्छ।
र टोन मा छाया आँखा को असामान्य मोती हरे रंग को जोड को जोड दि्छ।
हरी आँखा र गोरा कपालको लागि मेकअप नगर्ने
1. सँधै रंगको सही चयनको साथ सुरू गर्नुहोस्। तलको मोडेलमा मेकअप मेनु अस्पष्ट विकल्प हो। ठुलो गुलाबी लिपस्टिक सामान्य सामान्य उपस्थितिबाट स्पष्ट छ र त्यो सत्यताको प्रभाव उत्पन्न हुन्छ, जस्तै कि यो एक बार्बी केटी थियो। यस्तो छवि पनि सम्भव छ, तर सबभन्दा अगाडि गणना गर्नु पर्छ, जुन मेकअप संग बनाउनु पर्ने छाप सहित।
2. समग्र उपस्थिति शेष गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, माथिको मोडेलमा, मोती-हरित आँखाका साथ, एक सक्रिय लिपस्टिक मेला शान्त भूरी टोनमा मेनुको लागि उपयुक्त छ, दोस्रो अवस्थामा - केवल नग्न।
3. तपाईंको आँखा उज्ज्वल पेंसिल, कालो पिक्सेल वा ल्याउने छैन? यो आँखाको आकार र साइजमा निर्भर गर्दछ (सानो यसलाई तल नदिई), पिक्सेलको आकार (जब इन्फ्राइडिङेशन इन्फ्लुनिसिटेड हुन्छ) चयन गरिएको छायाहरू (यदि आँखाको रङ्ग दोहोर्याउँछ भने, कुनै पाइपिंग अनिवार्य छैन), आँखाको क्यान्सर (यदि तिनीहरू बर्फीले सेतो हो भने, राम्रो लाग्नेछ)।
अनुहार टोनको सावधान ह्यान्डलिंग र छाया र छालाको छातीमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। यो सबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर यो हल्का कपालको केटीहरूमा छ कि कुनै लापरवाही विशेष रूपमा ध्यान दिइनेछ।
मेकअप मा पेंसिल प्रविधी: एक मास्टर वर्ग
प्रसाधन सामाग्री "Doliva": प्रसाधन सामग्री र समीक्षाहरूको विचार। प्रसाधन सामाग्री "घाटी": क्रीम, मास्क
प्रसाधन सामग्री "बर्क" -2013
सुन्दर चित्रित आँखाहरू: प्रसाधन सामग्री विशेषज्ञ
कार्यस्थल मा बच्चा समर्थन को रिकभरी: समर्थन र भुक्तानीको रकम
"Priora विश्वव्यापी" - एक उचित मूल्य को लागि एक उचित समझौता
पुरानो pancreatitis: एक exacerbation मा र पछि आहार
"गोधूलि पोर्ट्रेट": atypical प्रेम कहानी को समीक्षा
कसरी मेकानिक्स मा सवारी र यसको लाभ के हुन्?
टोयोटा टाउन ऐस - आठ जापानी minivan व्यापक आवेदन
जीवनी Bianchi - प्रसिद्ध छोराछोरीको लेखक